Dr. Tint Swe's Writings: Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ
ဆရာခင်ဗျာ အလျှင်စလိုဖြစ်သည့်အတွက် အမှားပါရင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ၁၈-၁၁-၂၀၁၆ မနက် ၃:၅၀ ၀န်းကျင်မှာ ကျနော့အကိုတော်စပ်သူ လေဖြတ်သလိုလှုပ်မရ ၀ူးဝူးဝါးဝါးဖြစ်လာသည့်အတွက် ဆေးရုံကြီးကိုပို့ရပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲ သွေးယိုတယ်လို့ scan မှာပေါ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လေဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူစကြပါတယ်။ ဦးနှောက် ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ဖြစ်ပြီး ညာဘက်တခြမ်းလုံးလှုပ်မရနိင် (ကိုယ်တခြမ်းသေသလိုဖြစ်နေပါတယ်) အသက်က ၃၀ ၀င်းကျင် အသောက်အစား နေ့စဉ်ရှိပါတယ်။ လောလောဆယ် ကိုယ်တခြမ်းသေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဆေးရူံ ဆရာဝင်များက ပိတ်ရက်ခံနေတဲ့အတွက် တနင်္လာနေ့မှ တခုခုသိရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကနဦးဆရာတဦးမှ ခွဲစိက်ဆရာ မလိုဆေးသောက်ရင်ရသည်ဟု ပြောပါသည်။ သိလိုသည်မှာ ကိုယ်တခြမ်းသေလေဖြတ်ခြင်းအတွက် တိတိကျကျ မေးမရသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နိင်မည် အလားအလာနှင့် အကြံပြုချက်များ တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၁ နာရီအတွင်း ဆေးရုံသို့ရောက်ပါသည်။ မြန်မာစာအားနည်းချက်ရှိလျှင်သည်းခံပေးပါဆရာ။ ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျန်းမာပါစေ။
ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယူဆလို့သာရေးရတယ်။ ဆရာဝန်လို့သာ ရေးရတယ်။ ဝန်းကျင်လို့သာ ရေးရတယ်။ ခွဲစိတ်စရာလို့ ရေးရတယ်။ ဖြစ်တဲ့သူအသက်ကိုနောက်မှရေးလို့ မေးခွန်းကိုထပ်ဖတ်ရတယ်။ အချိန်ပိုကန်စေတယ်။ မေးနည်းစည်းကမ်းမှာ အသက်-ကျား-မ အရင်ဆုံးရေးဘို့ ထည့်ထားတယ်။
လေဖြတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ Stroke (စထုပ်ခ်) ကို ဦးနှောက်သွေးကြောရောဂါ Cerebrovascular accident (CVA) လို့ ခေါ်တယ်။ ရောဂါအမျိုးအစားအရ Cerebral infarction သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ Cerebral hemorrhage သွေးယိုခြင်းနဲ့ Ischemic stroke သွေးမဝလို့လေဖြတ်ခြင်းစသဖြင့် ခေါ်တယ်။ Brain attack လို့လဲခေါ်တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၃ဝ အတွင်း ပိုအဖြစ်များလာတယ်။ ၉၅% ဟာ အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ ၃ ပုံ ၂ ပုံက ၆၅ နှစ်ကျော်သူတွေ ဖြစ်တယ်။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကဖြစ်တာ တွေ့ရတယ်။ ယောက်ျားတွေက မိန်းမတွေထက် ဖြစ်နှုန်းမှာ ၂၅% ပိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေက သေဆုံးတာမှာ ၆ဝ% ရှိတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေက သက်တမ်း ပိုရှည်ကြတာနဲ့ သွေးဆုံးတာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်တယ်။ ကင်ဆာ၊ နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါ-အဆစ်နာရောဂါ ရှိနေသူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးဖွါးပြီးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
စိတ်ဖိအားများခြင်းနဲ့ အရက်သောက်ခြင်းတွေဟာ ယောက်ျားတွေအတွက် (စထုပ်) ခေါ်တဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြော ရုတ်တရက် မတော်တဆရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ (စထုပ်) ရတဲ့လူနာပေါင်း ၂၉ဝ (ယောက်ျား ၂၁ဝ + မိန်းမ ၈ဝ) ကို လေ့လာခဲ့ရာကနေ တွေ့ရှိရတာ ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ စိတ်ဖိအားများခြင်း (၁၈့၆%)၊ အရက်သောက်ခြင်း (၁၄့၈%)၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (၉%)၊ ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခြင်း (၃့၃%)၊ ကေဖင်းသောက်များခြင်း (၈့၆%)၊ လိင်နဲ့ပတ်သက်ခြင်း (၂့၎%) ကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်။ မိန်းမတွေမှာ စိတ်ဖိအားများခြင်း (၁၅%)၊ ဒေါသစိတ်ဖြစ်ခြင်း (၆့၃%)၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (၆့၃%)၊ ကေဖင်း သောက်များခြင်း (၅%) နဲ့ ခွဲစိတ်ကုသရခြင်း (၃့၈%) ဖြစ်ကြတယ်။ ကေဖင်းဆိုတာ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိုလာစတဲ့အရည်တွေဖြစ်တယ်။ အရင်က အသက်ကြီးမှ ဖြစ်တာများပေမဲ့ အခု အသက်ငယ်သူတွေမှာလဲ ဖြစ်လာနေတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်များတာ၊ စိတ်ဖိအားများတာနဲ့ ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးနောက် ဒီရောဂါဖြစ်လာကြတတ်တယ်။
ဦးနှောက်ကို ပေးပို့နေတဲ့ သွေးကြောလမ်းကြောင်းမှာ တခုခုမှားသွားရင် ဖြစ်လာစေတယ်။ ဦးနှောက်က သွေးမရတာကို စက္ကန့်ပိုင်းထက်ပိုပြီး မခံနိုင်ဘူး။ ဦးနှောက် (ဆဲလ်) တွေ သေကုန်တယ်။ ထိခိုက်မှုဟာ ရာသက်ပန် ဖြစ်တယ်။ အဓိက ၂ မျိုးရှိတယ်။ (၁) သွေးခဲလေးကနေ ကျဉ်းနေတဲ့တဲ့ သွေးလွှတ်ကြောထဲမှာ ပိတ်နေတာကြောင့် ဖြစ်တာကို Thrombotic stroke ခေါ်တယ်။ (၂) ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တခြားနေရာတွေမှာရှိနေတဲ့ သွေးခဲက ကွဲထွက်ပြီး ဦးနှောက်ဆီကို ရောက်လာတာကြောင့် ဖြစ်တာကို Embolic stroke လို့ခေါ်တယ်။
ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရှိသူတွေကတော့ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးခုန်မမှန်တာ၊ ဆီးချို၊ မိသားစုထဲမှာ အဲလိုဖြစ်သူရှိတာ၊ (ကိုလက်စထော) များနေတာ၊ အသက်ကြီးလာတာ၊ ၅၅ နှစ်ကျော်တာ၊ အသားမည်းဖြစ်တာ၊ နှလုံးရောဂါလဲရှိနေမယ်၊ ခြေထောက်ပိုင်းကို သွေးကြောတွေက ကျဉ်းလို့ သွေးလျှောက်တာလဲ နှေးမယ်ဆိုရင်၊ လူအဝလွန်သူတွေ၊ အရက်သေစာ အသောက်များသူတွေ၊ အငန်နဲ့ အဆီစား များသူတွေ၊ ဆေးလိပ် သောက်သူတွေ၊ (ကိုကိန်း) နဲ့ တားမြစ်တားတဲ့ ဆေးတွေကို သုံးသူတွေ၊ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်ပြီး ကိုယ်ဝန်တားဆေး သုံးသူအမျိုးသမီးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
သွေးခဲကြောင့်ဖြစ်တာမှာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောကြီးရောဂါနဲ့ Sickle cell anemia သွေးအားနည်းရောဂါကနေ ဖြစ်စေတယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို လာပိတ်စေနိုင်တာက အဆီခဲ၊ (ကိုလက်စထော) နဲ့ ကင်ဆာ (ဆဲလ်) တွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ Infectious endocarditis နှလုံးရောဂါကနေ လာတာမျိုးကနေလဲ ဖြစ်တယ်။ Atrial fibrillation နှလုံးရောဂါကနေ ဖြစ်တာများတယ်။ Atrial or ventricular septal defect နှလုံးရောဂါတွေကနေလဲ လာမယ်။ Deep vein thrombosis အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲကနေလဲ လာနိုင်တယ်။ အဆို့ရှင် အတုတပ်ထားတဲ့ နှလုံးကသွေးခဲဟာ ဦးနှောက်ကို လာပိတ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲလို တခြားနေရာက လာတာမျိုး အတွက် လာရင်းရောဂါကိုပါ ကုသရမယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်သလဲအပေါ် မူတည်တယ်။ တချို့မှာ ဖြစ်တာမသိဘဲ နေတတ်တယ်။ ဖြစ်တာက ရုတ်တရက်ဘဲ။ ဖြစ်စ ၁ ရက် ၂ ရက်မှာ ဖြစ်လိုက် ပေါ်လိုက်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပဌမဆုံး အကြိမ်က ခံစားရတာ အပြင်းထန်ဆုံးဘဲ။ ဒါပေမဲ့နောက်ဖြစ်ရင် ဆိုးဆိုးလာတော့မယ်။ ခေါင်းကိုက်မယ်။ ရုတ်တရက်ဖြစ်မယ်။ ပက်လက်လှဲချိန် ဖြစ်တယ်။ အိပ်ရာကနေ နိုးလာမယ်။ အနေအထား ပြောင်းတာနဲ့ ပိုဆိုးမယ်။ ခေါင်းမူးနေမယ်၊ အိပ်ချင်နေမယ်၊ သတိမကောင်းဖြစ်မယ်၊ သတိလစ်မယ်၊ နားကောင်းကောင်း မကြားဖြစ်မယ်၊ အရသာ မကောင်း ဖြစ်မယ်၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးနေမယ်၊ နာတာ-ထိတာ-ဖိတာကို ခံစားမှု၊ အပူ-အအေးသိတာ အရင်လိုမဟုတ်ဖြစ်မယ်၊ အမျိုရခက်မယ်၊ စာအရေးရ အဖတ်ရခက်မယ်၊ ဆီး-ဝမ်းအသွားရ အထိန်းရခက်မယ်၊ ကိုယ်ကို ထိန်းမတ်လို့ မရဖြစ်မယ်၊ အပြန်အလှန်ထိန်းညှိ မကောင်းဖြစ်မယ်၊ မျက်နှာ-ခြေ-လက် ကြွက်သားတွေ အားနည်းမယ် (တဘက်ထဲဖြစ်တာ များတယ်)၊ ထုံ-ကျင်နေမယ် (တဘက်ထဲဖြစ်တာ များတယ်)၊ ကိုယ်ကို မထိန်းနိုင်တာ၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်တခြမ်း လေဖြတ်တယ်လို့ ခေါ်တယ်။ စိတ်လှုတ်ရှားမှု-စိတ်ပုံစံ ပြောင်းမယ်၊ စကားပြောရခက်မယ်၊ သူများပြောတာကို နားမလည်ဖြစ်မယ်၊ မျက်ခွံအောက်ကျနေမယ်၊ မျက်စိကို လှုတ်မရဘူး၊ သူငယ်အိမ်ဟာ အလင်းရောင်ကို တုန့်ပြန်တာ နှေးမယ်၊ မျက်စိ အကြည့်ရခက်မယ်၊ နှလုံးခုန်-အသက်ရှူ မမှန်တာ၊ ခေါင်းကို တဖက်ဖက်ကို ကောင်းကောင်းလှည့်မရတာ၊ လျှာကိုကောင်းကောင်း အသုံးမချနိုင်ဘူး၊ မှတ်ဥာဏ်လျှော့မယ်။
3. CT Scan of the brain နဲ့ MRI Scan of the brain တွေလုပ်နိုင်တယ်။
4. MRA နဲ့ CT angiography လုပ်ရင် ဦးနှောက်ထဲက သွေးလွှတ်ကြောတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တာ မြင်ရမယ်။
5. Bleeding time, Blood cholesterol and sugar, Blood clotting tests, CBC နဲ့ ECG တွေလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
တကယ့်အရေးပေါ်ဖြစ်တယ်။ ဆေးရုံတက် ကုသရမယ်။ အများဆုံး လူနာတွေဟာ ၃ နာရီအတွင်း ရောက်ကြတယ်။ သွေးခဲကြောင့် ဖြစ်တာဆိုရင် Thrombolytic therapy သွေးခဲကျေဆေး ချက်ချင်း ပေးရတယ်။ လူတိုင်းကိုတော့ မပေးရပါ။ ရောဂါလက္ခဏာစပြီး ၃ နာရီအတွင်းဆို ပေးနိုင်တယ်။ သွေးခဲလို့ မဟုတ်ဘဲ သွေးယိုလို့ ဖြစ်နေချိန်ဆိုရင် ဒီဆေးကြောင့် ပိုဆိုးစေမယ်။
သွေးခဲကြောင့်ဖြစ်တာအတွက် Blood thinners သွေးကျဲဆေးဖြစ်တဲ့ Heparin or Warfarin (Coumadin) ဆေးကိုလဲ သုံးတယ်။ Aspirin နဲ့ Clopidogrel (Plavix) တွေကိုလဲ ပေးနိုင်တယ်။ သွေးခဲပိတ်လို့ဖြစ်ရင် အချိန်လဲ မီမယ်ဆိုရင် Thrombolysis သွေးခဲကို ချေဖျက်နည်းနဲ့ Thrombectomy ခွဲစိတ်နည်းတွေလုပ်နိုင်တယ်။ ဆေးပေးနည်းမှာ Aspirin, Clopidogrel, Dipyridamole ဆေးတွေကို သွေးမှုံတွေစုပြီး သွေးမခဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Thrombolysis ဆေးနဲ့ သွေးခဲကိုချေဖျက်နည်းလုပ်တယ်။ (tPA) ဆေးမျိုးသုံးတယ်။ ချက်ချင်းဖြစ်တာအတွက် သုံးသင့်-မသင့် အယူအဆ မတူကြဘူး။
သွေးယိုတာအတွက် ခွဲစိတ်နည်း သုံးလို့ရတာလဲရှိတယ်။ လည်ပင်း-သွေးလွှတ်ကြောကို ခွဲစိတ်ရတာလဲ ရှိတယ်။ Mechanical thrombectomy စက်သုံးနည်းကို ချက်ချင်းဖြစ်တာအတွက်သုံးတယ်။ ပေါင်ခြံကသွေးလွှတ်ကြောထဲကို Catheter ပိုက်ငယ်လေးတခု ဦးနှောက် သွေးပေးစနစ်ထဲအထိ ထိုးသွင်းရတယ်။ Corkscrew-like device ကိရိယာလေးကနေ သွေးခဲကို စုပ်ယူစေမယ်။ Angioplasty and stenting နည်းဆိုတာကလဲ ချက်ချင်း ဖြစ်တာကို သုံးတယ်။
ခေါင်းထဲမှာ သွေးယိုတာဖြစ်ရင် Neurosurgical evaluation လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရမယ်။ သွေးယိုတဲ့ အကြောင်းကို ရှာပြီး ကုသရမယ်။ ခွဲစိတ်တာ သိပ်မလိုတတ်ဘူး။ သွေးတိုး ရှိနေချိန်မှာ သွေးကျဆေး ပေးရတယ်။ တချို့က အစာအာဟာရနဲ့ အရည်ဖြည့်ပေးဘို့ လိုမယ်။
ဆေးကုတာအပြင် (ဖီဇီကယ်သာရာပီ)၊ စကားပြောနည်း၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကုသနည်း၊ အစာမျိုနည်းတွေလဲ လိုနိုင်တယ်။ ရေရှည်အတွက် ဆက်လုပ်ပေးရတယ်။ ပြန်ပြီး နလံထရေးနဲ့ နောင်မဖြစ်အောင်အတွက် လုပ်ရတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ အစားအသောက်တွေ အသက်ရှူလမ်းထဲရောက်တာ၊ ဥာဏ် သုံးရတဲ့အလုပ် ချို့ယွင်းတာ၊ လိမ့်ကျတာ၊ မလှုတ်ရှားနိုင်တာ၊ ကိုယ်တခြမ်း၊ တချို့နေရာတွေ လေဖြတ်တာ၊ ကြွက်သားတွေ တောင့်တင်းနေတာ၊ အစာအာဟာရ မပြည့်ဝတာ၊ ဖိအားဒဏ်ကြောင့် အနာဖြစ်တာ၊ စကား ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တာ၊ နားမလည်တာ၊ တွေးတောတာ၊ အာရုံစိုက်တာ အားနည်းတာ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဆင်တူတိုင်းတော့ Stroke မဟုတ်ပါ။ Brain tumor ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ Subdural hematoma ဦးနှောက်အဖုံးလွှာအောက်မှာရှိတဲ့သွေးခဲ၊ ဗက်တီးရီးယား၊ မှိုကနေဖြစ်စေတဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ ပြည်တည်နာ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ၊ တချို့ဆေးတွေ များသုံး-ပေးတာ၊ Sodium, Calcium, Glucose ဓါတ်ဆားတွေ နည်းသွားတာတွေကနေ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်တတ်တယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မဖြစ်အောင် -
3. ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့၊ (ကိုလက်စထော) ထိန်းပါ၊ သွေးတိုးထိန်းပါ၊ ဆီးချိုထိန်းပါ၊ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန် တနေ့ နာရီဝက်လုပ်ပါ၊ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းပါ၊ အရက်ဖြတ်ပါ-လျှော့ပါ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖြတ်ပါ၊
4. အစာအဟာရ မျှတပြည့်စုံပါစေ။ အသီး-အရွက်၊ အသီးအနှံစားပါ၊ အဆီး-အချို-အငန် လျှော့စားပါ၊ အဆီလွတ်အသား စားပါ၊ နို့ထွက်အစာတွေ လျှော့ပါ၊ ဆိုင်ဝယ်စား အစာတွေ သတိထားပါ၊ Saturated fat, Partially-hydrogenated နဲ့ Hydrogenated fats တွေ သတိထားပါ။
အမျိုးအစား၊ ဘယ်လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့သလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေကို ထိခိုက်သွားသလဲ၊ ဆေးကုသမှုကို ဘယ်လောက်မြန်မြန် ရခဲ့သလဲ ဆိုတာတွေအပေါ် မူတည်ပြီး လုံးဝကောင်းတာနဲ့ တချို့အလုပ်တွေ ပြန်မကောင်းနိုင်တော့တာ ဖြစ်တယ်။ တဝက်မက လူနာတွေဟာ အိမ်မှာတင်နေနိုင်ပြီး အတော်ပြန်လုပ်နိုင်ကြတယ်။ Ischemic stroke ဖြစ်သူတွေက Hemorrhagic stroke ဖြစ်သူတွေထက် ကံကောင်းကြတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဖြစ်တာဟာ ပဌမအကြိမ်နောက် လနဲနဲအကြာမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ Disability မသန်မစွမ်းဖြစ်တာ ၇၅% ရှိတယ်။ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်း၊ ထိခိုက်စေမယ်။ Post stroke depression စိတ်ဓါတ်ကျတာ ၃ဝ-၅ဝ% မှာ ခံစားရမယ်။ Emotional lability ခံစားမှုအားနည်းသွားတာ ၂ဝ% မှာ ဖြစ်စေတယ်။ Seizures တက်တတ်တာကို ၁ဝ% မှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။